Xurree... Archives - Ibsaa Jireenyaa
Namni jaalalaan qabame akka nama bishaan garmalee dheeboteeti. Namni dheebota hanga bishaan san dhuguu garmalee muddama. Erga bishaan dhuge booda dheebun itti hin dhagahamu. Namni jaalalaan qabamees fedhii ofii guutuf garmalee muddama. Erga fedhii ofii guuttate booda gubaan suni ni qabbanaa’a. Garuu karaan inni fedhii ofii ittiin guuttate murteessadha. Yoo karaa haraamatin (fakkeenyaf,sagaagalummaan) fedhii ofii guutatte gubaan suni irraa hin hir’atu, inuma itti dabala. Fakkeenyi isaa akka nama bishaan sooqida (ashaboo) ykn ho’aa dhugeeti. Yoo karaa fuudhaa heeruman ta’e suni dansaadha (gaariidha). Kuni immoo akka nama bishaan qabbanaa’a dhugeeti. Read more
Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-21ffaa
November 29, 2017 Sammubani Leave a comment
Barreefamonni gaggabaaboon kunniin fuula Fesbuuki Jireenya Badhaatu irraa walitti funaannaman (Ji’a Muddee 13-20/2016)
Madaa darbee hooqun dhibee ofitti hin kaasin. Yeroo tokko tokko wanta namoonni siin jedhan ykn badii sirratti raawwatan yaadachuun, madaa onnee teeti ofitti kaasta. Dallansuu darbe hoo’isuun sheyxaanni wanta badaa akka raawwattu itti si kakaasa. Kanaafu, gadoo kuufachuu irra namootaf irra darbi. Yommuu jechoota fi miidhaa isaanii yaadattu, “A’uzubillaahi mina sheyxaani rajiim (Sheyxaana abaarrame irraa Rabbiin tiikfama)” jedhi. Jechoota fi miidhaa isaanii irra deddeebiste yaadun madaa qalbii keeti ofitti hin kaasin. Wanti takka darbe duubatti akka hin deebine yaadadhu. Yaada kee gara wanta gaariitti qajeelchuuf tattaafadhu. Fakkeenyaf, beekumsa barbaadu.
Daandii Milkaa’inna fi Gammachu-kutaa-19
September 27, 2017 Sammubani Leave a comment
Jireenya kee keessatti kitaabota lama dubbisuu/qo’achuu hin dagatin. Tokkoffaa Jecha Rabbii kan ta’e Qur’aana. Lammaffaan immoo yuniversii nu marsee jiruudha. Yommuu Qur’aana dubbisnu, hubannaa fi xinxalliin dubbisuu qabna. Yommuu kitaaba yuniversii jennu immoo, wantoota Rabbiin uume irratti xinxalluu fi dandeetti Rabbii hubachuudha. Guyyaa guyyaan yommuu uumama samii, dachii, biqiltootaa, bineensota fi beeladoota, gaara fi kkf irratti xinxallitu, qalbiin tee ni kakaati, dandeetti Rabbii ni hubatta. Halkan samiin urjiile fi ji’aan akkamitti akka bareechifamte mee ilaali. Ganamas, bulee qulqulluu, qaawwa wayitu tan hin qabne fi aduudhaan akkamitti akka ibsamte mee itti xinxalli. Yoo akkana goote sammuu kee iddoo sirriitti fayyadamaa jirtaa jechuudha. Imaanni kee sii dabala. Read more
Daandii Milkaa’inna fi Gammachuu-Lakk.18
September 13, 2017 Sammubani 2 comments
Barruun tuni barreefamoota gaggabaabo ji’a Sadaasa (November) 2016 fuula Fesbuuki Jireenya Badhaatu irraa walitti funaannamtedha.
Mallatoole fedhii lubbuu hordofuu agarsiisan keessaa tokko, wanta badaa ta’e garuu gaarii fakkaatu hojjachuuf ni ariifatta. Mirqaanaa fi kokolfaa hojjachuu jalqabda. Sheyxaanni hojii badaa kana garmalee miidhagsa. Haa ta’uu malee, boodarratti gaabbii fi gadda laalessaatu sitti dhagahama. Haalli akkanaa si qunnamee beekaa? Yoo si hin qunnamiin, namoota naannoo kee jiran baditti kan lixan ilaali. Fakkeenyaf, gurbaa fi intalli, mirqaansu fi kokkolfaa karaa haraamatin walitti dhufu. Akkuma yeroon darbuun hariiroon isaan jidduu jiru gaabbii fi gadda akka ibiddaatti nama gubuutti jijjirama adeema. Kanaafu, hojiin badaan gaarii yommuu sitti fakkaatu fi hojjachuu yommuu eegaltu kokolfituu fi kan gammaddu yoo taate, fedhii lubbuu hordofaa akka jirtu yaadadhu, dhumti hojii keeti gaabbii fi gadda hamaa akka ta’u beeki. Nafsee tee faallessi. Obsii. Kuni mallattoo jalqaba dhukkuba fedhii lubbuu hordofuuti. Read more
Wantoonni sadan nama baraaran: Rabbiin iccitii fi ifatti sodaachu, yeroo dallansuu haqa ta’u, yeroo durummaa fi hiyyummaa madaallamaa ta’u.” Read more
Xurree Milkaa’inna fi Gammachuu-kutaa 15
February 22, 2017 Sammubani 3 comments
الصبرُ اليومَ عن معاصي اللَّهِ خير من الصبر على الأغلال ”
“Sansalata irratti obsuu irra har’a Rabbiin faalleessu irraa obsutu caalaa.” jedhe dargaggeessi.
Kana jechuun, boru guyyaa qiyaama sababa cubbuutin sansalataan hidhamanii ibidda keessatti dararamu irra har’a cubbuu raawwachuu irraa obsuu fi Rabbii ajajamutu caala. Read more
Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.14
January 25, 2017 Sammubani Leave a comment
Barruun tuni walitti kuufama barreefamoota gaggabaabo Jireenya Badhaatu kan ji’a Hagayya 2016 ti.
Osoo dhukkuba jaalalatiif furmaata barbaaddu, karaa irratti rakkoon baay’een si qunnamuu danda’a. Cinqiin, keessi gubachuun, dharra’uun, gadduun, addummeen, hirriba dhabuun fi kkf sitti dhagahamu danda’u. Furmaanni hundarra gaarii nama dhukkuba jaalalaatin qabamee, Rabbiin baay’isanii yaadachuu, hojii gaarii waliin ko’oomu, beekumsa Islaama barbaadu, kaayyoo jireenya yaadachu (Jannataa fi Jahannamii yaadachu), yoo danda’ame fuudhu/heerumu, soomu, haraama ilaalu irraa fagaachu fi kkf. Yommuu sheyxaanni wanta badatti si waswaasuu (kakaasu), Rabbiin yaadadhu, badhaasa fi adabbii Isaa yaadadhu. Laalan jaalala laalaa ibidda jahannamii gadi akka ta’e hubadhu. Laalaa jaalala qabbaneessuf karaa haraamatin kan deemtu yoo taate addunyaa aakhiratti akka salphattu yaadadhu. Laalaa jaalala qabaneessuf zikrii afaani hin buufatin. Read more
Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-lakk.13
December 15, 2016 Sammubani One comment
Yeroo tokko tokko daandiin jijjiramaa si dinqisiisa. Daandii kana keessatti guffuwwanii fi wantoonni duubatti si harkisan baay’eedha. Yeroo tokko ni gammada yeroo biraa immoo ni gaddita, yeroo tokko fuula guurta yeroo biraa immoo ni seeqatta, yeroo tokko qalbiin tee ni cabdi yeroo biraa immoo sirroofte dhaabbata (tasgabbi horatta), yeroo tokko jireenyi sitti dukkanoofti yeroo biraa immoo jireenyi ifa si taati, yeroo tokko ni dhamaata yeroo biraa immoo wanti hunduu ifa si ta’u, yeroo tokko jabeenya dhabda yeroo biraa immoo jabeenya argatta, yeroo tokko tokko gara funduraatti ariitin fiigda yeroo tokko tokko immoo suuta deemta ykn ni harkifatta…. Kunniin hunduu yoo obsa qabaatte fi carraaqxe jireenya kee ijaaru. Yommuu jireenya darbee koo ilaalu, gaabbi fi gammachuun natti dhagahama. Dogongora fi hanqinn kiyyaaf nan gaabba. Bu’aa dogongora kiyyaa irraa baraaramun gara daandii qajeelatti Rabbiin na qajeelchu Isaatif nan gammada. Alhamdulillah! Kanaafu jireenya keessatti abdii hin kutin. Read more
Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.12
November 12, 2016 Sammubani Leave a comment
Hanga feete jireenyi tee dukkanooftu fi tana nama dhamaastu yoo taate, abdii hin kutin. Jireenyi addunyaa tanaa takka gara olii, takka gara gadi deemti. Yeroon ati itti gammaddu ni jira. Akkasumas yeroon ati itti gadditus ni jira. Lamaan isaanitu siif gaariidha yoo obsite fi Rabbii galata galchite. Kanaafu yeroo gadditu fi mukooftu obsi,abdii hin kutin. Dukkannii fi dumeessi jireenya yeroo muraasan booda ni darba. Ifni ni dhufa. Yeroo gammadus Rabbiif galata galchi. Haala kanaan jireenyi tee gammachuun guuttamti. Read more